33 MUDANE OO KA TIRSAN G/WAKIILADA S/L OO MOOSHIN SOO DHIGAY AY KAGA HADLAYAAN DOORASHADA | Toggaherer's Weblog
Golaha wakiiilada ayaa guda galay dooda mooshin cusub oo golaha la hor keenay 33 mudane muushinkasi oo soo jeediyeen mooshinki ay ku dalbanayeen in dorshada madaxtooyadu ku qabsoonto waqtigii loo qoondeeyey ee 29 March ee sanadkan aynu ku guda jirno.
Golaha wakiilada oo uu shir gudoominayo gudoomiye kuxigeenka koowaad golaha wakiilada Somaliland Mudane Abdi Casiis Maxamed Samaale waxaa mudanayaashii ka qayb galay ay liishaanka saareen muhimada ay dad iyo dalkaba u leedahay doorashada øo waqtigii loo qoondeeyey ku qabsoonta, dhinaca kale mudanayaashu waxa ay is tusaaleeyeen dhibaatada ka iman karta hadii dib u dhac ku yimaado dorashada.
Inta badan mudanayasha ka qayb galay waxa ay ku canaanteen xukuumada Somaliland xil gudasho laan taasi oo ay sheegen in ay munaasib tahay in xukuumada lagu oogo maamuus ka xayuubin maadaama oo ay ka soo bixi wayday waajibaadkii loo xil saaray .
Xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Caalin oo ka mid ahaa mudanayaashii fadhiga ka hadlay, ayaa sheegay in aanay muuqan saansaan doorasho ku dhacaysaa, waxaanuu yidhi; “Weli ma haynin warqad rasmi ah oo ka soo baxday dhinacyada doorashada ku shaqåda leh oo sheegaysa in doorashadii aanay waqtigeedii ku qabsoomi Karin, waxase muuqda ifafaale muujinaya in aanay doorashadu waqtigeedii ku qabsoonto.” sidaa waxaa Xildhbaan Abdi Rahmaan dheere
Sidoo kal waxaa halkaasi ka hadlay Xildhibaan Maxamed Jaamac waxaanuu yidhi “Waxa kale oo jira mooshin xukuumadda iyo Inter Peace wadaan oo ay ku doonayaan in la beddelo xubno ka mid ah Komishanka Doorashooyinka, arrintaas oo ka mid ah waxyaabaha la doonayo inay doorashada dib u ridaan,” ayuu yidhi Xildhibaan Maxamed Jaamac.
Xildhibaanada golaha wakiiladu waxa ay commisionka u soo jeediyeen in ay mudeeyaan maalinta la qabanayo doorashooyinka , mooshinka ku saabsan doorashada madaxtooyada waxa uu ku soo beegmay waqti ay kaabiga ina soo saartay mudadii loo qoondeeyey doorashada madaxtooyada iyo iyadoo uu soo baxaayo dareemo iyo cabsiyo laga qabo in uu dib u dhac ku yimaado doorashada .
Golaha wakiilada ayaa laga filayaa in ay nuxurka doodan ka soo saaraan goaan gole oo wajibinaaya in ay doorashadu ku qabsoonto waqtigii loo qoondeeyey ee 29 march ee sanadkan aynu ku guda jirno.
Warqabadka Togahrer Hargaysa